Soo dejisan Vim 14 – Vessoft
Qeybta: Tafatiraha qoraalka
Bogga rasmiga ah: Vim
Vim – editor text la xorriyad buuxda ah in configurate, automatize iyo farsameeyo qoraalka ah ee qaabab kala duwan. Vim u qaybsan yahay ee qaabab dhowr ah, mid kasta oo lagu gartaa hawlaha qaarkood in qabashada hawlaha badan oo laguu ogolaado in aad in la isu geeyo amarka kala duwan ee macros in automatize shaqada. Vim taageertaa badan oo kordhin iyo goobaha lagama maarmaanka ah si astaysto baahida user ee. Sidoo kale software kuu ogolaanayaa inaad la files of tifaftirayaasha kale shaqeeyaan.
Aqoonsiga iyo diinta of files ee qaabab kala duwan
Shaqo la macros
talooyin Automatic erayada, khadadka iyo magacyada file
taariikhda amarka haboon
Soo dejisan Vim
Faallo ku saabsan Vim
Vim Xirfadaha la xiriira
Tani waa tifaftire qoraal ah oo leh wakhti wanagsan oo taageera luqadaha barnaamijyada iyo qalabyada badan ee shaqada waxsoosaarka leh ee code.
EditPlus – tifatire shaqeynaya oo leh koodh. Softiweerku wuxuu ka kooban yahay qaab muuqaaleedyo xoog leh iyo karti u leh gelinta faylasha maxalliga ah barnaamijka FTP-server.
Tani waa tifaftire qoraal ah oo badan oo farsamo leh oo leh dhowr qalab oo waxtar leh si ay u saxaan lambarka koodhka.
Emacs – tifaftire qoraal shaqeynaya. Softiweerka wuxuu awoodaa inuu qabto howlaha aasaasiga ah ee tifaftiraha wuxuuna u habeyn karaa habka hawlgalka ee luuqadaha barnaamijyada qaarkood.
MiKTeX – softiweer si loo qoro buugaagta, maqaalada sayniska iyo buugaagta buugaagta ee sayniska saxda ah waxa ku jira oo ay ka mid yihiin qaacidooyinka adag ee xisaabta.